Soo degso FSPX Airbus A350-900XWB FSX & P3D - Rikoooo
downloads 79 218
Moodel & Rinjiyeyn ay sameysay FSpainter, VC waxaa qoray Thomas Ruth, codka ka yimid KelvinMckenzieFlightsim, oo ay soo wada urursadeen Mees Jansen
Halkan waxaa ku cusub Airbus A350-900. a diyaarad cusub kacaan. The model iyo repaints la abuuray by FSpainter. Thanks to FSpainter for model ah. qol The dalwaddii waa in oo ka mid ah-A330 300 ka Thomas Ruth (waxaa hadda ma freeware A350 VC). Diyaarad sameeyey flyable iyo xirmo shireen by Mees Jansen. Mid la repaints 5.
The Airbus A350 XWB waa dheer-shixnad diyaarad line Halkii ah planemaker Yurub Airbus. Markii hore la odhan jiray A350, waa model this oo ka soo jeeda qoys reer A330 iyo A340; Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii hadaladiisa airline ah, waxaa la go'aamiyay in bartamihii July-2006 in dib loo eego fikirka iyo waxa ay siiyaan sooctey ballaaran, labadaba marka la barbar dhigo A330 iyo A340, iyo gaar ahaan marka la barbar dhigo ay tartan ugu weyn, 787 Boeing.
Mashruuca waxaa sidaas loo baxshay "A350 XWB," - "Body Wide dheeraad ah". Isbeddelkan ayaa goor dambe oo design samaynta isticmaalka weyn oo qalabka kooban, ayaa si weyn u kordhay kharashka design diyaaradda oo dib loo dhigay ka 2011 in 2014 u galeen adeegga (Wikipedia)
Author: Moodel & Rinjiyeyn ay sameysay FSpainter, VC waxaa qoray Thomas Ruth, codka ka yimid KelvinMckenzieFlightsim, oo ay soo wada urursadeen Mees Jansen